Best 24 Samurai Tattoo Ideas for Men - Tattoos Art Ideas
Ny tanjona 24 Samatoi Tattoo ho an'ny lehilahy
Fantatrao ve fa mitovy ny tatoazy samurai? Hitantsika ny lehilahy sy ny vehivavy miditra efitrano fivoriana tsy misy dikany izay tena tian'izy ireo hosodoko amin'ny vatany. Ahoana no ahafahanao mamaha io olana io? Rehefa mahita tatoazy samirai ianao, dia mino ianao fa tonga tamin'ny tontolon'ny zavakanto ny farany
Ny tatoazy samirai dia ny tatoazy izay nahazo karazana tsy fahita firy izay antsoina hoe bushido- midika hoe ny fomba fiainan'ny miaramila. Ny bushido dia manana ampahany manan-danja izay miresaka momba ny Samurai. Ny tatoazy dia mampiseho ny halemem-panahy, ny haja, ny hatsaram-panahy, ny tsy fivadihana, ny fahamarinan-toetra ary ny fahatsoram-po. Ny tatoazy dia ampiasaina ihany koa mba hiresahana momba ny herim-po, ny hery ary ny famokarana. Azo aseho amin'ny zavatra mahalana sy tsy manam-paharoa toy ny orita, koi trondro ary horita hitazona fiarovana, fanampiana ary herim-po.
Ny tato amin'ny #Samurai dia nahatonga azy kokoa ho an'ny olona haneho ny tsy fahaizany sy ny herim-pony. Naneho hery sy hery izy ireo. Ny tatoazy dia mety ho masculine ary ny lehilahy dia tia mampiasa izany amin'ny fandresena ny ady ary koa ny fahafatesana. Ny samurai #tattoo dia miresaka momba ny toetran'ny olona manao azy. Ny tatoazy dia mety ho vehivavy ihany koa ary entina am-pitiavana amin'ny vehivavy. Ny hevitry ny Samurai dia afaka manohy ny filazana amin'ny hafa ny tantara izay tsy azonao ambara.
1. Super tatoazy samurai mahafinaritra amin'ny tongotra lehilahy
2. Samy tia tato ho an'ny samurai tato ho an'ny lehilahy
Rehefa mahazo ny tatoatin'ny samurai miaramila ianao, dia azonao antoka fa hohajainao amin'ny zavatra inoanao sy noho ny zavatra tianao hotratrarina amin'ity fiainana ity ianao.
3. Tato ho an'ny samurai japoney amin'ny lehilahy indray
Hahita ny tato amin'ny samurai japoney iray ianao #design ao anaty aterineto ary avela ho anao ny safidinao. Azonao atao ny milaza fa ity tatoazy ity dia mahatalanjona sy mahafinaritra.
Ny safidy haka tatoazy samurai dia zavatra tsy tokony helingelenina. Ny tatoazy samirai tahaka ity endrika ity dia hitoetra eo amin'ny hoditrao amin'ny zavatra sisa tavela amin'ny fiainanao noho ny endriny mahafinaritra.
4. Fitaovana tatoatan'ny samurai tatoazy
Ny tato-tsarin'ny samurai tattoo dia tsy azo tanterahina amin'ny mpanakanto iray izay afaka misintona tsara. Raha te-hanatratra tatoazy samurai ianao, dia tokony hiantoka fa ny zavatra rehetra tianao hatao dia ny fikarakarana ny tatoazy alohan'ny ahafahanao manomboka sary.
5. Samirai mpiady tato ho an'ny totozy ravaka ho an'ny zazalahy
Alohan'ny hahatongavanao an'ity tatoazy samurai mahafinaritra ity dia azonao antoka fa mahazo tari-dalana avy amin'ny mpanao asa tanana tato ho anao ianao alohan'ny hahitanao teknika na handoavana tatoazy hafa izay tsy mety.
6. Japoney tamaro tato ho an'ny famolavolana tattoo ho an'ny lehilahy miverina sy soroka
Raha mieritreritra ny hanao tatoazy samurai ianao, dia efa nandray fanapahan-kevitra tsara ianao tamin'ny fampiasanao an'io lamina io mba hampifanaraka ny endriny manokana. Ny zavatra rehetra tokony hataonao dia ny manomboka amin'ny famolavolana anao ary ny sisa amin'ny asa dia azo tanterahina amin'ny fanohanan'ny tatoazy.
7. Samurai karazan-tatoazy amin'ny lehilahy
Azonao inoana fa ny tato-tsigraman'i Samurai dia misy ifandraisany amin'ny zavakanto na kolontsaina. Na inona na inoanao, tsy tokony handratra ny didim-pitsaranao ianao raha te hahazo tatoazy mahafinaritra toy izany.
8. Sangisangy mahatsikaikin'ny sabatra tato anaty tànana
Olona vitsivitsy angamba no mila maka sary an-tsaina ny sabatra samurai eo amin'ny vatany.
9. Mpiady mpiady Samurai miaraka amin'ny tonta amin'ny tato anaty sabatra
10. Tiger miaraka amin'ny samurai mpiady tatoazy eo amin'ny soroka
Rehefa te-hanova ny fomba fijerinao ianao, dia azonao ampiasaina ity tiger ity miaraka amin'ny samurai mpiady tatoazy eo amin'ny sorokao. Manantena anao izany
11. Ny sabatra samurai miverina amin'ny tato amin'ny famolavolana tato ho an'ny zazalahy
Ny kisty mahery fo mitambolimbolina samurai miaraka amin'ny tontalin'ny tato anaty fiarovan-tena dia tsy azo tanterahina raha tsy manampy ny tatoazy ianao hanoratana ny endriny.
12. Mamono mpiady samurai feno miaraka amin'ny tiger tattoo fanombohana hevitra ho an'ny ankizilahy
13. Samurai mpiady tato anaty tato an-tonta ho an'ny lehilahy
14. Tato ho an'ny samurai japoney
15. Mpiady samurai matihanina feno tambatra amin'ny tontolon'ny tato anaty tonta
Na inona na inona ilainao araka ny drafitra momba ny tatoazy, dia azo inoana fa hahita izany ianao, ary misy drafitra maro, avy amin'ny fomba mahazatra amin'ny amin'izao fotoana izao.
16. Iray samurai japoney miverina miaraka amin'ny sabatra tattoo fantatry ny zazalahy
17. Sampana samurai tapa-tanana ho an'ny lehilahy
Mba hanamarinana fa ny iray izay nofidinao dia no azo antoka indrindra, mila mikaroka singa manan-danja sasantsasany ianao.
18. Mamono mpiady samurai sy tati-tsabatra ho an'ny lehilahy
19. Tena mahavariana ny tato ho an'ny samurai miaramila tato anaty tattoo
20. Samurai sabatra tato ho an'ny lehilahy
21. Tattoo manampahaizana Japoney samurai matanjaka miloko marevaka
22. Mamonjy miaramila samurai mpiady miaraka amin'ny tontolon'ny fiadiana tattoo ho an'ny lehilahy
23. Mitsangana amin'ny masoandro sy ny samurai mpiady tatoazy eo amin'ny soroky ny lehilahy
24. Japoney samurai mpiady tatoazy mamolavola amin'ny lehilahy miverina
tattoostattoosfitiavana tatoazytattoo infinitydiamondra tattooscorpion tattootratra tatoazycat tattoostattoos voronatattoos sleevekoi fish tattoolion tattoosmozika tatoazyTattoo Feathertattoo watercolortatoazy fokotattoos mpivadytattoo octopustattoos backloto voninkazoarrow tattootattoos armcompass tattootato ho an'ny vatofantsikaelefanta tatoazytattoos rahavavyeagle tattoostattoos ho an'ny lehilahyNy zodiaka dia mampiseho tatoazytattoos mahafatifatyAnkle Tattoosmasoandro tatoazyhenna tattooanjely tattoostattoos foottattoo cherry blossomtatoazy ho an'ny zazavavytattoo eyetatoazy lolomehndi designrip tattoosraozy tatoazyHeart Tattoostatoazy voninkazotattoos crossnamana tattoos tsara indrindratanana tatoazymoon tattoosTatoazy ara-jeometrikatattoo ideas